Inona no atao hoe scandium bike? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta scandium - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Bisikileta scandium - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Inona no atao hoe scandium bike?
Antsoina hoe 'scandium'zana-kazofiraka aliminiomazana-kazo. Ny firaka aliminioma ampiasaina amin'ny fantson'izy ireo dia manodidina ny 2%scandiumnampiana an'io mba hampitomboana kely ny tanjaka. Io dia mamela afilanjanafantsona hatao manify kely kokoa, noho izany dia milanja kely noho ny fantsona vita amin'ny firaka aliminioma tsy misyscandium.
Tongasoa eto amin'ny GCN Tech Show. - Manana bisikileta vaovao avy any Battaglin izahay amin'ity herinandro ity, manana paompy marani-tsaina Bluetooth izahay, manana ny bisikiletanao izahay, ny fanavaozana anao ary mazava ho azy fa azo antoka ny bisikileta. - Ary izahay koa manana aliminioma manokana izay tsy azonao lasibatra, fa azonao atao izao. - Eny izay hanokatra varavarana, heveriko fa ny teknikan'ny famokarana betsaka dia ho mora kokoa, sa tsy izany? (mozika mitohy) Marina, Battaglin voalohany namoaka bisikileta vaovao, ny Officina Battaglin Portofino, tsy fantatro raha nambarako tsara izany na tsia - Eny, bisikileta nofidian'izy ireo hampiasa ireo fantsona vy be loatra, miaraka amin'ny vy fanao be loatra lugs izay Battaglin no voalohany namolavola azy ireo, izy ireo dia nijery ilay endrika Columbus Spirit Steel izay tena manampy amin'ny traikefa amin'ny fiara ihany koa.
Izay heveriko fa milay be. - Ie, ary raha eo am-pijerena isika, inona no ataony? Tadidinao ve ny lokon'izy ireo? - Eny, lasa ny mocha brown, sa tsy izany? Asyria, tsy fantatro izay eritreretinao - Eny, ny tiako holazaina dia rehefa hitako ilay famaritana milaza fa Mocha Brown sy Amber dia nieritreritra aho fa raha notolorana ahy aho dia mety hiteny hoe misaotra betsaka, saingy, tsia. Tiako ilay loko fa ankehitriny hitako akaiky izy io, toa mahavariana, sa tsy izany? - Eny, tsara tarehy toa izany, hoy aho. - Eny, hiteny eny amin'ny iray amin'izy ireo aho.
Ary ny mahavariana, rehefa eny an-tsena ianao no mividy iray, dia manasa anao hihaona amin'i Giovanni Battaglin ary hiresaka ny fepetra takiana amin'izany bisikileta izany, momba ny fampiasana azy io ary mazava ho azy, mba hifanaraka amin'ny bikan'ny vatanao sy ny karazanyo - Toy izany koa ity ve Rolls Royce amin'ny bisikileta, John? - Heveriko izany, eny. Hotsaraina toy ny VIP ianao - Eny, azo antoka fa hanao izany - Afaka misoratra anarana amin'ny fitsaboana feno amin'ny fonon-tanana fotsy. Fitaovana tianao hojerena bisikileta, na vita na mety hatsangana.- Eny, ka nandefa an'i Opie izahay hanadihady ary namoaka izany izy.
Zahao ireo andalana mahafinaritra ireo .- Tsia, tsia, tsia, raha ny marina dia nomenay asa i Chris, sa tsy izany? miverina miaraka aminy.
Ny zavatra eritreretintsika kokoa dia, ary, fitaovana izay tsy azo ampiarahina na atambatra satria tsy afaka. - Ie ary nahatonga anay hisaina izany ary, hitanay izany. Ny fahitana farany ny aliminioma AA7075 izay tsy azo namboarina dia azo ahodina ankehitriny. - Ie, ary tena mahaliana izany satria maivana ny fahatelo noho ny vy, ary efa nanomboka ny taona 1940 ny fasika, ampiasaina amin'ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny fandefasana entana.
Tsy maintsy niresaka tamin'ny profesora aho, ka andao hohenointsika izay lazainy momba ny zavatra hitany farany.- Fantatrao, tato ho ato, angamba nandritra ny folo taona lasa, ny fifantohana manontolo dia ny fanaovana fibre karbaona, saingy mbola misy betsaka ny olona any izay tena tia aluminium - eny hitako izany satria mety ho mafy ny metaly alimo. Milaza aho fa tsara ny fibre carbon fa misy ny fahalemena ao anatiny, miresaka ny tanjany isika, raha mikasika ny endrinao mavesatra ianao dia kitiho amin'ny sisiny, mety ho tapaka izy io, ary raha vaky indray mandeha ianao dia afaka ' samy hafa ny metaly fanamboarana.
Ny metaly dia henjana ary ny metaly koa manana malefaka ary azo amboarina avy eo. Azontsika atao ny manamboatra izay misy fahasimbana. Ka io ilay metaly, tsy milaza aho fa ny metaly dia hanafoana tanteraka ny karbaona, fa tsy ny metaly no hameno ny banga eo anelanelan'ny fibre karbaona sy ny alimina ambany.
Ary ho ahy manokana, heveriko ihany koa fa ny aluminium aluminium 775 na 750 dia hanjakazaka amin'ny fifaninanana mivantana amin'ny kofehin'ny karbaona. Satria mety hitovy lanja isika ary tsara kokoa aza ny fampisehoana azy. Ity no taonjato faha-21, hitako ny onja lehibe ho avy - Whoa, andao hiresaka izao.
Nanoparticle karbônina Titanium ary tena mahaliana tokoa ny mahita ireo teknika vaovao ireo tamin'ny farany nampiasana tamin'ny fitaovana efa an-taonan'ny ampondra ary azo omena antsika mpitaingina bisikileta ary, mihamazava hatrany isika ary miaraka amin'izay koa - eny, ary manokatra varavarana ho an'ny tontolo bisikileta sy singa vaovao namboarina avy tamin'ity firaka ity, izay nofinofy taloha.- Eny, isika ve? eo am-piandohan'ny vanim-potoana vaovao amin'ny fampivoarana ny frame bisikileta? - Fantatro - Inona no tianao ahitanao bisikileta namboarina? - Eny, tiako ny hahita bisikileta vita pirinty 3D vita amin'ny fitaovana tena tsy mampino eritreretiko .- Eny, zavatra hafahafa.
Tena te-hitsidika orinasa mpanonta 3D aho tsy ho ela mba hahitako tsara ny fomba anaovan'izy ireo an'ity sy ny antony, ny tiako holazaina dia hoe maninona ny bisikileta magnesium? Vita tamin'ny taona 80 izy ireo. Kirk Precision, tsy naharitra ela. Ara-bakiteny, ny orinasa na ny bisikileta.
Kelp koa? Mieritreritra aho fa misy ifandraisany amin'ny ahidraty io, sa tsy izany? - Eny, izany tokoa ny ahidrano - Eny - Ecobricks? Azonao atao ny manamboatra bisikileta avy any Ecobrick miaraka amin'ny fako be loatra - Tsy fantatro fa tianao ny mahita bisikileta haorina amin'ny ho avy satria hanana manam-pahaizana tanteraka isika any, matotra, henoko ny momba ny aliminioma antsoina hoe aluminium alim-baravarankely, milay be, ary misy fantsom-pantsaka mivarina ao anaty lambam-pandriana, izay mahatonga azy ho rafitra matanjaka tokoa ary, ny tena zava-dehibe, maivana koa. Fa nanentana ireto orinasa lehibe toa an'i Boeing sy Airbus ireto aho hitsidika azy ireo ary tsy avelany hiditra am-baravarana aho, raha ny marina dia mandà ny fampiasana izany izy ireo. Saingy loharanom-baovao marim-pototra no nilazana ahy - fantatr'izy ireo tsara koa ianao - eny, marina, eny, ireo tanana kely maloto ireo.
Nolazain'ny loharanom-baovao marim-pototra tokoa fa ampiasain'izy ireo izany, fa raha miatrika aluminium aluminium ianao dia ampahafantaro ahy satria te hitsidika azy aho. Ho entiko miaraka amiko koa io.- Oh, mazava ho azy.- Mandrosoa hiatrika ilay dia.- Eny, 100%.
Marina, tamin'ity herinandro ity izahay dia nahazo fanondroana paompy vaovao avy amin'ny SILCA, ny VIAGGIO, ilay iray, tsara, iray paompy marani-tsaina satria izy io dia misy ny mari-pamantarana Bluetooth. Tanana azo esorina, tongotra azo avadika ary ao anaty kitapo lamba mihosin-savoka aza, noho izany ny fitehirizana mety tsara amin'ny fialan-tsasatry ny toby fampiofanana anao, heveriko. - Toa tsara izany.
Ary amin'io refy fanerena Bluetooth io dia mahitsy hatramin'ny 0,5 psi izy io, izay mahatonga azy io ho fitaovana tsara indrindra azo raisina ary alao antoka fa tonga lafatra tanteraka ny tsindryo - eny. Toa tsara izany, sa tsy izany? - Heveriko fa tena tsara izany.
Milamina izy ary toy ny paompy mandeha, heveriko fa tena tsara izany. - Ie, hafahafa be ilay izy. Somary variana amin'ny paompy aho.
Nanana paompy lalamby SILCA tao an-trano aho, angamba nandritra ny 30 taona mahery, angamba. - Nampiasaiko io. - Ie, miaraka amin'ireo mpanasa lamba hoditra, eny, heveriko fa nopotehiny izany.
bisikileta lebron james
Saingy heveriko ihany koa fa ny SILCA dia iray amin'ireo mpanamboatra paompy tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, na tsia ny zokiny indrindra. Midika izany fa miaraka amin'ny zavatra maoderina koa izy ireo. Ho fanamarihana farany momba ny zavatra teknolojia, nandefa izany tany amin'ny iray tamin'ireo mpijery izahay ary tsara izany, kapoaka karbonina mahafinaritra be izy, sa tsy izany? Angamba isika naka aingam-panahy avy amin'ilay sakaizantsika Hailsey, izay vao nandeha aho vao nahita ny fihetsik'ireo karbôna nataony - eny, lahatsoratra mahavariana, ary tiako ny mahita ny zavatra rehetra nisy, ny zavatra andavanandro amin'ny fitaovana izay nampiasaina taloha bisikileta.
Moa ve ianao nahavita mpihazona fantsona vitsivitsy na fanantonana palitao na rojo na kavina aza nandritra ny taona maro - eny. Tsaroako aho indray mandeha nahita vehivavy izay nanana rohy roa tao amin'ny rojo vy- Aza. John, hosakanako ianao any - Ary saika nivoaka aho mba hohomboina ny sofiko - Tsia.
Tsy manana hevitra fotsiny, sakaiza - Okay, tsy misy olana. Saingy tsy tianay ny hacking wimps anao, sa tsy izany? - Tsia. - Tsy manana toerana hanaovana an'izany izahay eto - Tsia - Raha ny tokony ho izy dia te hahita ireo zavatra tena mahafinaritra nataonao ireo izahay satria heveriko fa ny namantsika tao niaraka tamin'ny fitoeran'ny kapoaka karbonina dia mbola tsy nokasihiny akory. ny ambonimbony .- No.
Ary mifandraisa, satria faly izahay mahita izay azonao eritreretina.- Eny. Ampiasao ny fitaovana uploader; Mandraisa anjara.
Teknolojia bebe kokoa amin'ny herinandro ambony. Fotoana fanavaozana ny distro ankehitriny. - Aza mividy fanavaozana fa kodiarana nohavaozina, zana-kazo, omenao anarana izany, natolotrao.
Ary alefaso amin'ny alàlan'ny fitaovana uploader etsy ambany. Nefa alohan'ny hidirantsika amin'ny fanendrena amin'ity herinandro ity dia mila manambara ny mpandresy tamin'ny herinandro lasa isika. Ary iza izany? - Ny herinandro lasa teo dia nandresy i Thomas. - Ry Thomas, mifandraisa aminay amin'ny Facebook mba handaminana ny fandefasana ireo mofomamy mofomamy, araka ny iantsoan'ny Ollie azy.
Varotra ao an-tsena tokoa isika, sa tsy izany? - Eny, manana izahay, eny, lafo avokoa. Tsy nahita na iray aza. - Eny, fa aza manahy, tsy hanadino ianao.
Raha vantany vao miverina ao anaty tahiry izy ireo dia halefanay iray aminao. Araka ny voalazan'Andriamatoa Opie, Andriamatoa
Bridgewood dia misy 27 amin'izy ireo ao an-trano. Tsy haiko izay ataony amin'izany. Ankoatry ny fanaovana porridge.
Mahitsy. - Mihevitra ve izy fa maherifo sa zavatra hafa? - Tokony ho tafiditra tao amin'ireo akanjo rehetra ireo izy. Cape Crusader.
Na eo aza izany, James, tohizo, iza no ananantsika amin'ity herinandro ity? - Amin'ity herinandro ity dia manana an'i Andrew avy any Tasmania isika - Endrey, toerana mahafinaritra, mbola tsy nisy mihitsy aho - Izaho na - Eny? - Tokony ho roa taona lasa izay, Andrew dia nividy ny bisikiletany an-dalambe voalohany, ilay bisikileta avanti Giro AR 1 eny rehetra eny. Roa ambin'ny folo volana taty aoriana, andro nahagaga i Andrew nandanilany ny fetran'ny fahazoana AR tsy eny an-dalambe rehefa nidina nidina ambany tanimbary nataon'ny mpifanila trano taminy. Fohy ny tantara fohy, Andrew nokapohiny vy vita tamin'ny vy, tamin'ny hafainganam-pandeha - hafainganam-pandeha - namaky tampoka feno ho blackberry - blackberry! - Ie.
Ny ego iray simba no tena naratra fa indrisy fa ny ankamaroan'ny bisikileta dia simba ary vaky ny kodiarana, ny valizy napetaka, ny stereo miondrika dia midika fa tsy azo naleha ny Avanti - Tsy azo atao - nanomboka nanangona vola i Andrew. Ary nahazo singa vaovao, ao anatin'izany ny kodiarana lehibe misy pivot ary avy eo nolokoina ny rindrina ary nomeny loko mifanaraka amin'ny kodiarana izy. Tonga dia tanteraka araka ny nantenain'i Andrew izany, mitaingina toy ny nofinofy ary tiany kokoa noho ny taloha ny bisikileta - teo izy teo aloha, jereo alohan'ny nidirany tao anaty fefy vy namboarina sy ireo blackberry, misy izany, - Oh ! Jereo ity! - Andrew! Ry zazalahy maditra! Jereo koa ireo tariby maitso ireo! - Heveriko fa tsara izany, sa tsy izany? Tiako ilay volondavenona metaly basy - eny? - miaraka amin'ity maitso fluor ity mamirapiratra - eny - Andrew, bisikileta tena tsara ity - lalao ara-drariny ho anao, ny masoandro.
Tsara. Manantena aho fa sitrana ianao. Saingy Andrew, eny, tsy hanana ny azy samirery amin'ity herinandro ity izy - Tsia, tsy mora daholo izany - Satria manohitra an'i Tanner avy any Dallas any Texas izy.
Ity manam-pahaizana manokana ity, dia ny bisikiletin'i Tanner voalohany novidiny tamin'ny $ 800 tany amin'ny oniversite. Izy io dia niaraka tamin'i Shimano 105, izay nandeha niaraka tamin'ny sombin-javatra ampiasaina avy amin'ny rahalahin'i uso - kanefa dia sary eo aminy miaraka amin'ny kasety kely na sombin-javatra. Tamin'ny taona 2018 dia nanapa-kevitra i Tanner fa hanangana tanteraka ity bisikileta ity izay tsy mitentina mihoatra ny $ 100 ho an'ny olona rehetra - volana maro taty aoriana, ary dolara bebe kokoa noho ny tian'i Tanner ekena, manana ity bisikileta nofinofy ity izy.
Doko ho an'ny perla manokana an'ny mpanjifa, kodiarana karbaona Hunt, fork fialonana.- Oh! - SRAM napetraka ho an'ny vondrona, baoritra baoritra Zipp carbon, Vittoria Corsa G Plus tan panels.- Oh! - Fon-tavoahangy karbonina Arendor, toa mihazakazaka toy ny Superbike ilay bisikileta ary hotehiriziny- Mandrakizay.- Ka, Tanner, ity no bisikiletany alohan'izany.- Jereo izany.
Bisikileta tsara tarehy.- Saingy ity, zanako lahy.- Woo! - Tahaka ny voahangy! -Eny, hosodoko vita amin'ny perla voahangy taloha.-Oh, tsara tarehy mahafinaritra io.-Eny. - Zahao hahitanao azy. - Ie, tsy tsara tarehy ny any aoriana, sa tsy izany? Midika izany fa voatifitra teo an-joron'ilay efitrano izy io .- Tsia, mety ho tsara kokoa izany.- Eny.- Saingy avy eo aza, nifandray tamin'ny fihazana sy ny logo teo amin'ny kodiarana ianao, fantatrao? - Ie.- Nieritreritra kely momba an'io izy, sa tsy izany? - Kodiarana mahafinaritra.- Nentiny tany amin'ny peratra lehibe izy io ary teo anelanelan'ny hidina.
Ankehitriny tiako izany, sakaiza. - Ie, Andrew avy any Aostralia sa Tanner avy any Texas ihany? - Fantatro izay hotadiaviko. - Ary heveriko fa fantatro koa hoe iza no hosafidiako.
Fa tsy momba antsika io, sa tsy izany? Aiza ry zareo no hifidy, James? - Ambony havia - Ankavanana ambony. Fa ho antsika ankavia, marina? - Eny, ho anay ankavia. - Ka raha manindry eo isika dia afaka mifidy.
Eto izahay. Amin'ny herinandro ambony izahay dia hanambara fa izahay, ary mazava ho azy fa hahazo mofomamy mofomamy ianao, izay mandresy. Fotoana izao ho an'ny Bike Vault, izay isainay na tsara ny bisikiletanao. - Eny, ary inona no mitranga, James, raha misy olona lasa tsara tarehy be? - Eny, afaka mitendry lakolosy aho John. (Naneno ny lakolosy) Whoo! - Ilay mpiantsoantso ao an-tanàna, ny fiantsoako azy any amin'ny birao satria manana feo mamiratra izy, mihomehy zavatra foana izy, tsy fantatro izay.- O-hay, o-hay, o-hay.- Toy izany koa, eny .
Ka raha te-hanolotra ny bisikiletanao any amin'ny bisikileta soa aman-tsara ianao hahazoanao tombo-kase tena tsara, ahoana no anaovan'izy ireo izany? - tsara mankany amin'ny fitaovana fampakaram-bady izy ireo, ary ny famaritana, ny pitsopitsony rehetra dia ao amin'ny famaritana etsy ambany - eny, tsotra araka izay azo atao. - Ie - tsara, andao ny handroso. Ny voalohany amin'ity herinandro ity dia i Kashif avy any amin'ny terrasiny.
Eny ry Kashif, tamin'ny herinandro lasa teo dia hoy aho hoe mba omeo famaritana amin'ny an-tsipiriany hoe avy aiza ianao. Ny patio, tsy ny tena nisy ahy teo, vady, fa ezaka tsara. Na izany na tsy izany, ity ny Fuji Sportif 2.3 an'i Kashif, manana vondrona Claris izy, 52-39 rojo vy, 11 32% .- Mahafinaritra! - Eny, tsara kokoa noho ny azonao vidiana, sa tsy izany? marina? - Tsotra be.
Ka mainty daholo ianareo, tiako izany, eny, lehilahy mainty. Ary avy eo manana ny decal Fuji fotsy ianao. Ie, heveriko fa mahafinaritra be izany. - Eny, bisikileta mijery mahafinaritra io .- Raha ny tenako manokana dia tsy hanome azy tena tsara aho.- Heveriko fa afaka nanao zavatra bebe kokoa ianao niaraka tamin'ny lasa.- Eny, heveriko fa ny dikany dia misy dikany betsaka satria ilay bisikileta io mankany amin'ny Pop dia mandeha.- Eny, ary amin'izao fotoana izao dia tsy ampy ho antsika fotsiny izany. -
Eny, heveriko fa mitovy aminao aho John, fa tsy
Eny.- Eny, eny. Bisikileta mahafinaritra, bisikileta mahafinaritra, Kashif.
Marina, avy eo iza no manaraka? - Nahazo an'i Matthew Lux avy tany San Diego aho tao amin'ity faritra mahafinaritra any California ity - Oh eny - The Serotta Au Trot - Oh, mety tiako izany. - Tena lehibe izany. Tsy azoko tsara ny tongotro, azo antoka izany.- Tsia, iray ihany io, antenaiko koa.- Karazana karbonina fanao any ambony io.- Eny? Toa maivana AX sa zavatra hafa? Sa mety THM? - Nihoatra ny kodiarana ratchet an'ny keramika - Eny - Manana rojo mena mifanentana amin'ny kodiarana mitsambikina lehibe an'ny Serrantos izy io - THMC, sa tsy izany? - Ary io koa dia misy ifandraisany amin'ny loko mena ny valves, ka manana decal mena eo aminy izy izay tena milay, tiako be izany ary ao amin'ny tavoahanginy ihany koa izy. - Skewer tena haingana, amin'ny ilany tsy izy fa amin'ny kodia eo alohany dia toa izao, sa tsy ny levera? - Eny izany .- Eny, eny, ry malalako.- Saingy izy 'Manana cranks mahafinaritra koa.- Eny.- Toy ny gazy karbonika.- Tsy azoko atao
Tsy manana ny masoko mifandraika na ny solomasoko aho.- Manana vondrona vondrona mahafinaritra sy mahafinaritra izy.- Eny.
Fa tsy haiko. Tiako izany, saingy tsy fantatro raha tena mahafatifaty tokoa - Ie, midika izany fa manana kitapo mahafinaritra ao aminy - Eny, kitabe tsara ao io, saingy mahatsapa aho fa tsy nalaina ilay izy tsara be ve? , zavatra iray hafa. Tsy fantatro! Rovitra aho.
Raha izaho manokana dia heveriko fa bisikileta mahafinaritra io .- Hiaraka aminao ity Joany ity. Bisikileta mahafinaritra.
Saingy misaotra anao nanolotra, satria tena izy --- bisikileta tena tsara io.- Eny izany.- Avy eo i Louisianne avy any Cambrai any France, Wilier Triestina Izoard XP, voninkazo, makà vondrona kodiarana Zipp 454, seza karbonina Ritchey lahatsoratra, izao no toa azy, Toa toa kasety fatorana hoditra androngo koa io, sa tsy izany? - Ie, endrika mainty sy mena hafa, tsy azoko antoka hoe inona no mitranga amin'ilay lasely, tena mitombina izany raha ny eritreritro. 'Notapahiko manokana koa ilay fantsom-pifamoivoizana, tsy hitsara satria mbola tsy nanapaka ny ahy aho, saingy eny, eritrereto izany - eny, ny kodiarana dia afaka mampiasa fampifanarahana tsara kokoa amin'ny hevitro, angamba koa - tiako ireo 454er.- Ie b Fa ny tiako holazaina dia hoe fotsiny --- Eny, fantatro izay lazainao- Atsipazo ireo valves- Eny.
Ny antsipiriany sarotra, ny pitsopitsony sarotra.- Ary koa ny lumotra kely, ao anaty vongan-kazo koa ny vato. Louisanne, avia.
fanatanjahan-tena amin'ny tongotra sy abs
Mialà amin'ny mpanadio tsindry ambony anao.- Eny, tsy resy lahatra manokana amin'izany aho, azafady, mila manao ahy fotsiny aho.- Eny, manome iray tsara ihany koa aho.
Eny ary, iza no manaraka avy eo? - Eny ary, manana an'i Patrick avy any Marina Bay any Singapour isika.- Oh, faritra tsara eto amin'izao tontolo izao.- Marina izany.
Ary ny 2013 Argon 18 Krypton miaraka amin'ny vondrona Shimano 105 sy R7000s napetraka. Woo! Eny, miditra fotsiny aho ary miteny hoe, tsy tiako ny ao ambadika. - Tsia. - Ny famantarana amin'ny trano fidiovana, tena izy, eny - kely loatra izany, eo ambanin'ny rojo any, izany karazana tatatra - fako ve izany? - tsara aho dunno, fa izany no zavatra emoji mahatsiravina rehefa mahita kloa mivoaka avy ao anaty lavaka ianao, sa tsy izany? izany, avy amin'ny tatatra? - Eny eny.
Ary koa, somary manjavozavo, ny sary, kodiarana any aoriana, jereo.- Eny, fa bisikileta mahafinaritra io, saingy- Tsara bisikileta io.- Tsy tsara fotsiny ilay izy -Nice.
Ka homeko an'izany tsara izany, sa tsy izany? - Ie, bisikileta mahafinaritra ho ahy koa io. Tsara ry Patrick, marina .- Azafady, azafady, tiako ho tena mahafinaritra ity.- Iza no mahalala, marina.
Manaraka izany dia i Victor avy any Los Angeles, Kalifornia, faharoa avy any California amin'ity herinandro ity.- bisikileta LA io.- Eny, Pinarello Dogma F10 Disc 2018.
Aza mahita be dia be eto, sa tsy izany? - Tsy manao izany ianao, fa kosa mila milaza aho fa misolelaka ny masony. Manana ny volomboasary ianao, izay volomboasary matanjaka tokoa miaraka amin'ireo sticker vita amin'ny volamena Pinarello. - Ie. - Eny, hitanao fa mihazakazaka izy satria any aminy ny kitapony ary tavoahangy feno roa.- Eny, hydration no lakile.- Eny, manana vondrona maromaro izy, manana kodiarana zip izy. - Eny. - Kodiarana inona no ananany eo.- Kodiarana Pirelli, o! Safidy tsy mahazatra, Pirellis.
Fa fantatrao, safidy hendry safidy tsara, heveriko fa toa --- tiako io fiaviana io! Izahay dia tiako ny any aoriana satria tena mampiseho ny bisikileta izy io ary tena kanto ary tena milay. Tena mpankafy azy io aho. - Eny, nentina tany amin'ny Pershing Avenue 13 io, ny endriny, hitanao eo izany - Eny, toa tsy nampiasaina io trano io - Tsia, tsia, tsia, tsia. - Oh, hivoaka aho, Jon, omeko izany afaka mitendry lakolosy ve aho? - Azonao atao. (Maneno ny lakolosy) - Tsara be! Misaotra nandefa ahy niditra, satria tena te-haneno. - Iray ihany amin'ity herinandro ity! - Fantatro - heveriko fa ity angamba no fotoana voalohany! - Marina ve? - Tsy haiko, eo izahay, heveriko fa isepisode nomerao 60 ity.
Sambany aho tsy mahatadidy iray tena tsara tarehy. - Alefaso ny bisikiletanao satria tena tianay ny mahazo azy ireo ary mamakivaky ny bisikiletanao rehetra.- Eny, ampiasao ao anaty ny fonao ny fitaovana fampidiranay.
Ary famaritana amin'ny antsipiriany kokoa noho ny 'terras', azafady.- Eny.- Amin'ny herinandro ambony kokoa Bike Vault.
Ka eo isika, saika ny fotoana hanaovana fampisehoana amin'ny faran'ny taona, fa aza manahy fa tsara, manana atiny tsara be dia be isika amin'ity herinandro ity. - Ie, tsy maintsy milaza aho fa manana zavatra tena mahaliana tokony hatao. Ary misaotra anao indray aho fa manana ahy ianao ary aza adino ny manome ny ankihiben'ity lahatsoratra ity raha tianao izany.- Eny, ary zarao amin'ny namanao ihany koa ary maninona raha mitsidika ny fivarotana ao amin'ny magazay fivarotana - Globalcyclingnetwork.com- Aiza izahay manana be dia be ny zava-tsoa ho anao ary alao antoka fa namely ny bokotra fampandrenesana ianao amin'izay isaky ny mandeha mivantana dia misy fampitandremana izay mandeha toy izao: - Zava-dehibe! - Ah, izany no fahalavorariana, sa tsy izany? Ary izao ho an'ny lahatsoratra tena tsara iray, ahoana ny tsindry iray eo amboniny - eny ary lahatsoratra iray mahatalanjona kokoa.
Inona no ifandraisan'ny scandium amin'ny bisikileta?
Scandiummiasa amin'ny alàlan'ny fandresen-dahatra ny molekiola alimo handrafitra ny tenany. Itydiaindrindra sarobidy amin'ny alimina avo lenta, toy ny firaka 7005. Araka ny fomban-drazana, firaka 7005manaomaivana, mahery, sandoka na masinina cncbisikiletasinga, faafakatsy azo ampidinina satria malemy rehefa miempo.
Mahery noho ny aluminium ny scandium?
Scandiumbasy dia mahery BE raha ampitahaina amin'ny azy ireoVIRATYmpiara-miasa. TSYScandiumtsy hisy mavesatra 41 na 44 Magnum.9 2010.
Tsara ve ny bisikileta alimo?
VIRATYMaivana ihany koa ny zana-kazo ary mora vidy kokoa noho ny zana-kazo fibre karbaona. amin'nytsarakodiarana sy seza ahazoana aina ary fangejana, anbisikileta aliminiomadia afaka mahazo aina toy ny vy ihanybisikileta.18 2021.
Afaka esorina ve ny scandium?
izanynomanatsara ny fananana injeniera amin'ny firaka, saingy kely dia kely ny tena izyscandiumvoarohirohy. Ny firakaafaka'tharafesina, satria tsy misy vy. Toy ny firaka alimina hafa, ny oksiômanika rehetra eto an-tany izay miaro ny forum dia miaro sy manakana ny fahasimbana bebe kokoa, noho izany dia maimaimpoana ny fikolokoloana.07.29.2009
Mazava noho ny aluminium ny scandium?
Scandiumamin'ny ankapobenymaivana noho ny aluminium. Izy ireo koa dia mora tohina kokoa noho nyscandiumfananana.06.30.2009
Mahery va ny firaka scandium?
nyfirakaHo an'nyroa-polo ambyAo amin'nyroa-polo ambylevitra10Scroa-polo ambyianareo30dia toy nymaherytoy ny titanium, maivana toy ny aluminium, ary mafy toy ny seramika sasany. Ny tena fampiharana nyscandiumamin'ny lanja dia ao amin'ny aluminium-firaka scandiumho an'ny singa indostrian'ny aerospace madinidinika.
Iza no bisikileta firaka na aliminioma tsara kokoa?
firakany zana-kazo dia manana henjana mitovy ihany na inona na inona karazanafirakaefa ampiasaina izany. Matetika izy ireo dia henjana noho ny vata vy, hoy ny Internetbisikiletatranokalam-baovao Brightspoke, na dia izany azaVIRATYmanana hamafiny ambany, satria ny frame dia miorina amin'ny habetsaky nyVIRATY.
Fa maninona no tsara kokoa ny bisikileta alimo?
Noho ny faharetan'izy ireo, ny fanoherana ny harafesina, ny fitoniana ary ny lanjany ambany,VIRATYNy zana-kazo dia mety mifanaraka amin'ny filan'ny mpitaingina isan-karazany. Raha ny tombotsoan'ny anVIRATYMety tsy azo ampitahaina amin'ny vatan'ny titane sy ny kibon'ny karbaona ny endrinybisikileta, frame vita amin'nyVIRATYTsy dia lafo loatra.
Inona avy ireo fampiasana 3 amin'ny scandium?
Scandiumdiaampiasainaamin'ny aliminioma-scandiumalloys ho an'ny indostrian'ny aerospace ary ho an'ny fitaovana fanatanjahan-tena toy ny zana bisikileta, tehina fanjonoana, hazo vy golf ary ramanavy baseball.Scandiumiodide diaampiasainaamin'ny jiro etona merkiora, izayampiasainamamerina ny tara-masoandro amin'ny studio ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika sy fahitalavitra.
Karazan-tsarimihetsika inona no ampiasain'ny bisikileta scandium?
Teraka ny frame aluminium ary nitombo ka lasa Scandium, hazavana tena hazavana mifanaraka amin'ny fenitry ny karbonina saingy henjana kokoa. Scandium no tena lohan'ny endrika maoderina sy fampisehoana amin'ny alimo. Misoratra anarana mba hahazoana tolotra manokana, fanomezana maimaimpoana ary fifampiraharahana indray mandeha.
Rahoviana no mivoaka ny bisikileta amin'ny hazakazaka Standert scandium?
Nilaza i Standert fa gaga tamin'ny valiny haingana izy ireo, saingy faly, ary efa nampandrenesin'izy ireo ny mpanao trano italiana mba hanombohana ny asa-tanana ny andiany manaraka hamenoana ny tahiry (antenaina fa hiverina ny volana septambra, aorian'ny fialantsasatry ny fahavaratra italianina).
Ahoana no nahazoana ny anarany ilay bisikileta scandium De Rosa?
Ugo dia nahatsapa fa ilaina ny manararaotra ny fironana ary manatsara azy amin'ny alàlan'ny famolavolana azy amin'ny famolavolana sy ny fahombiazan'ny Italiana. Teraka ny frame aluminium ary nitombo ka lasa Scandium, hazavana tena hazavana mifanaraka amin'ny fenitry ny karbonina saingy henjana kokoa.